Nhau - Ndeapi mashandisirwo akasiyana ezvishandiso zvakasiyana zvePointer Pattern Aluminium Plate？
Ndeapi mashandisirwo akasiyana ezvishandiso zvakasiyana zvePointer Pattern Aluminium Plate？
Basa rekutanga remapatani ealuminium ekudzivirira ndeyekudzivirira kutsvedza. Zviitiko zvedu zvakajairika zvekushandisa mabhazi, escalators, maelevheti, nezvimwewo, panogadzirwa aruminiyamu mapaneru anoshandiswa kudzivirira kutsvedza. Munzvimbo idzi, mashandiro anoita aruminiyamu mapaneru haana kukwirira, uye 1060 aluminium mapaneru anogona kusangana nezvinodiwa zvekuita. Saka ndeupi musiyano uripo pakati pekuita kwakasiyana uye mashandisirwo epateni aluminium zvinhu? Inotevera idiki nhevedzano yekusuma kwauri.
Refrigeration michina inodawo anti-skid, munzvimbo idzi, anti-ngura kuita chiratidzo chakakosha, 1060 aluminium performance yatadza kuita firiji anti-skid kuita, 3003 aluminium ndiro seyanzvi anti-ngura aruminiyamu ndiro, ndiyo anti- skid chirongwa munzvimbo dzakanyorova. Pamusoro peiyo 3003 aluminium ndiro, 3A21 aluminium ndiro zvakare yakajairika, ese ndeaya e3 akateedzana ealuminium manganese alloy ndiro.
5052 Patterned aruminiyamu ndiro ainyanya kushandiswa mugungwa zvakatipoteredza.
Imwe yemabhenefiti e5 akateedzana aruminiyamu ndiro ndeyekuti inogona kunyatso kurwisa kuora kweacid uye alkali nharaunda, saka 5052 mhando aluminium ndiro ndiyo huru yekurwisa-skid zvinhu mumugungwa nharaunda. Ehezve, mune iyo mashanu akateedzana aruminiyamu ndiro, kune zvakare mabhureki akadai sa5083, 5754, nezvimwewo, ayo anogona kushandiswa kugadzira pateni aluminium ndiro.
Ndezvipi zvinoshandiswa nemapateni ealuminium mapatani? Kune zvakare chiitiko chekushandisa, senge yemuchadenga basa chikuva, yakanyanya tembiricha anti-skid, yakakwira acid uye alkali ngura nharaunda, nekuda kwekuchengetedza zvikonzero, pateni yealuminium performance performance yakanyanya kwazvo, 6061 patterned aluminium ndiro yakazvarwa. 6061 aluminium ndiro yese yekuita yakanaka kwazvo, inogona kupa dziviriro yakasimba kune yakanyanya njodzi njodzi nzvimbo inopesana-skid.
Izvo zviri pamusoro zvirimo zvinoshandiswa zvakasiyana zvezvishandiso zvakasiyana zvekushongedza aluminium ndiro iyo Ketchum inosuma kwauri. Nekuenderera mberi kwekuenderera mberi kwealuminiumel yekunyungudika tekinoroji uye shanduko yeyakagadzirwa maitiro, mhando uye zvigadzirwa zveateni aluminium ndiro ichave yakawanda uye yakawanda, uye ichaita yakakosha basa mune mamwe maindasitiri.
aruminiyamu yakarongedzwa pepa mutengo, Yakachipa Aluminium Sheets, 7050 aluminium pepa, Anodized Aluminium Sheet Metal Vanopa, aluminium alloy 6061 mutengo, Tsika Plate Aluminium Sheets,